Abavelisi beeMveliso kunye nabaBoneleli-imveliso yaseTshayina yeeMveliso
Ngaphezu kwama-22 eminyaka yamava
Imigaqo yethu yesiKhokelo
Imilinganiselo yokuziphatha, ukuziphatha nokuziphatha
Kutheni Khetha Thina
Izizathu ezi-6 eziphezulu zokusikhetha
Greenguard FIKELELA SGS UL
I-Fiberglass Sunscreen Fabric
Ilaphu leZebra elikhusela ilanga
Ilaphu le-Roller Blinds
Ilaphu lePolyester Roller Blinds
Verman Blinds Fabric
Shangri-la Blinds Fabric
Ilaphu leemfama ezithe nkqo
Ilaphu leNcini leemfama
Isiporo esisezantsi se-Roller Blinds
Isiporo esisezantsi seZebra/Shangri-La Blinds
Ikhava ye-Roller Blinds
Itheyiphu ephindwe kabini yePVC
PVC / PET Ibhokisi
Misa Ring/Tshixa Iwasha
Umthwali weemfama ezithe nkqo
IPhepha lokuDibanisa kwiimfama ezithe nkqo
Imbaleki ye-Cord Drive kwiimfama ezithe nkqo
Inkxaso ye-Tilt Rod yeeBlinds ezithe nkqo
Ikhaya Decor Verman Blinds Fabric Semi-blackout
Uyilo olutsha ileli yeWholeyili yeTape Shangri-La Blinds F...
Umhombiso waseKhaya othe tyaba weShangri-La Blind Fabric Semi-B...
Ilaphu likaShangri-La Roller liFafafaza ngelaphu leShangri-La Roller elinemithunzi emithathu...
Ikhaya Decor Dual Rainbow Blinds Fabric For Office
China Decor Privacy Zebra Fabric For Office Wi...
Multi-colored Double Layer Blinds Fabric 100% Polyester
Rainbow Roller Blinds Day-Night-Zebra Curtain Shades...
Ushicilelo lweBlackout Zebra Day and Night Rainbow Duo Bl...
China Roller Blinds Day & Night Shades Icandelo Com...
China Office Side Screen Custom Sunscreen Zebra Auto...
China Machine Mainland Faux yelinen Zebra Dual Day kunye...
China Windows Sun Shade Polyester Sunscreen Rolling ...
Ifestile yeShutter yelanga enePattern Spring Roller Bli...
China Windows Sun Shade Polyester Rolling Motorized ...
Isivandisi sefestile yeManuwali yangaphandle Isiqingatha somthunzi womaleko oBini ...
Yenza ilaphu le-Sunscreen livela e-China iiBlinds Facto...
Uphononongo lweLanga lokuHlunga uRhwebo lweRola ye-Sunscreen...
Customized Ububanzi China Windows Decoration Curtain Co...
China Manufacturers Sunscreen Roller Blinds Fabric Su...
Ihoyili yeAnti-UV Fiberglass Ilaphu lelanga leR...
Isampulu sasimahla seSemi Blackout Roller Blind Fabric
I-Eco-Friendly Roller Fabric Polyester Semi Blackout
Ifashoni eNtsha isimbo esitsha seLayer Shangri-La Fabric Semi-blackout
I-Shangri-La blinds (ekwabizwa ngokuba yi-sheer blinds) luhlobo lweemfama zokulawula ukukhanya, ezinamaphepha ahambelanayo anamacangca amaninzi. Xa iimfama zivaliwe, ii-blades zihambelana ngokusisiseko kwi-pair of sheets , kwaye xa zivulwa, ii-blades zifikelela kwisikhundla esiphezulu kwi-perpendicular to pair of sheets. Phakathi kwabo, ishidi kunye ne-mesh zihlanganiswe nge-textile okanye ezinye iinkqubo. Xa zonke zivuliwe, iileya ezimbini ze-tulle zi-perpendicular kwaye zihambelana nomnye. Ngeli xesha, ukukhanya kuya kuncitshiswa xa kudlula ukuphakama kwelinye icala lomsonto. Qhubeka ulungelelanisa ukuphakama kwamakhethini, iimfama ziya kujikeleza kunye ne-axis ephezulu.
Isetyenziswa ngokubanzi kumakhaya, iihotele, iivenkile zokutyela, iivillas, izakhiwo zeofisi eziphezulu kunye nezinye iindawo. Kwilaphu le-Shangri-La blinds, ububanzi esibenzayo bu-3m, kwaye izinto eziphathekayo ziyi-polyester eyi-100%.
Yangaphandle Manual Zebra Sun Screen Roller Blind Sunscreen Blinds Fabrics
Iimfama zeZebra zikwakwaziwa ngokuba ziimfama ezithambileyo, iimfama ze rainbow, dimming roller blind, double layer roller blind. Ilaphu elilukiweyo elenziwe ngamaqhekeza amancinci kunye ne-gauze enobubanzi obulinganayo obuhlukaniswe ngaphandle komnye nomnye, igxininiswe kwelinye icala, kwaye enye isiphelo ihlanganiswe ne-shaft ukulungisa ukukhanya.
Xa i-gauze kunye ne-gauze zidibanisa, ukukhanya kuthambile, kwinqanaba elithile, ukunciphisa ukukhanya okuthe ngqo. Xa ilaphu kunye nelaphu liphazamisekile, ukukhanya kuvaliwe ngokupheleleyo, ukuze ekugqibeleni kufezekiswe injongo yokuthintela ukukhanya. Xa iimfama kufuneka zivuleke ngokupheleleyo, iimfama zinokugqithwa ngokupheleleyo. I-zebra blind idibanisa ukufudumala kwelaphu, ukulula kwe-roller blind, kunye nomsebenzi wokunciphisa iimfama. Kulula ukuyisebenzisa kwaye ineendlela ezahlukeneyo ze-shading ngaphandle kokuphazamisa intsimi yombono. Lukhetho olufanelekileyo kwiofisi kunye nokuhlobisa ifestile yasekhaya.
Luluphi uhlobo lwamakhethini olumele lusetyenziswe kwiofisi
Xa kuthelekiswa namalaphu aqhelekileyo, amalaphu okukhanya kwelanga aneengenelo ezininzi.
Ukuqulunqwa: 30% yePolyester kunye ne-70% yePVC
Ububanzi obugqityiweyo: 200cm/250cm/300cm
Ukupakishwa okusemgangathweni: 30Meter
Ukukhawuleza koMbala: Grade4.5, AATCC 16-2003
UHlelo loMlilo: NFPA701(USA)
Imibimbi Ukumelana neeMfaphazi zeSellula eziMabini ngelaphu 20mm
Ilaphu le-honeycomb liyimfama luhlobo olutsha lwezinto eziluhlaza zokukhusela indalo yefestile yokwakha. Ubume be-Groeve honeycomb blinds fabrics ilula kwaye isitayela sityebile, sivumela abasebenzisi ukuba bakhethe ngokukhululekileyo ngokweemfuno zendawo kunye ne-atmosphere, ukudala ukubonakaliswa kwendawo ecebileyo yekhaya. Uyilo lwe-honeycomb lunokugcina umoya kwi-hollow layer, ukuvelisa ubushushu obungaguqukiyo bangaphakathi, ukufezekisa umphumo wokushisa ukushisa kunye nokugcinwa kwamandla, kunokucoca imisebe ye-ultraviolet elangeni, ukukhusela ngokufanelekileyo ifenitshala kunye neekhaphethi ezixabisekileyo, njl.
Sinikezela ngeesampulu zasimahla zikwakhona ukuze ujonge umgangatho kwaye ukhethe umbala ngokuthe ngqo phambi komyalelo. Ngaphezu koko, amalaphu ethu anombala otyebileyo kwaye alandela indlela yefashoni yehlabathi.
Umzi-mveliso oshushu uThengisa ilaphu le-Roller Semi-blackout 2m Ububanzi
Ukuqulunqwa: 100% Polyester
Ububanzi obugqityiweyo: 200/250 cm
Ubunzima ngem2: 160g/m2±5%
Ukukhawuleza kombala: ≥4 iBanga
Ubude bokuqengqeleka: 50m
Factory Supply Pearlic Roller Fabric Semi-blackout
Ububanzi obugqityiweyo: 210/250 cm
Ubunzima ngem2: 180g/m2±5%
Isampulu sasimahla sePearlic Roller Fabric 100% Polyester 2m Ububanzi
Ubunzima ngem2: 200g/m2±5%
Uyilo lwangoku lwePearlic Roller Fabric Semi-blackout 100% Polyester
Isiqinisekiso soMgangatho we-Roller Blind yePerileic Fabric 2.5m Ububanzi
IWholesile Entle iPearlic Roller Fabric 100% Polyester 2.5m Ububanzi
Ilaphu eliPhezulu eliPheleleyo eliPheleleyo eliPheleleyo eliPhila ngeLanga eliyi-2.5m Ububanzi be-100% yePolyester
123456 Okulandelayo > >> Iphepha 1/24
Idilesi:No.1098 iCandelo eliMbindi le-Jiannan Avenue, i-High-Tech. Indawo, Chengdu, China.
Thumela umyalezo wakho kuthi